I-Nantriposomes ye-Ultrasonic Yama-Allicin Azinzile - Hielscher Ultrasound Technology
I-Allicin iyindawo esebenza kahle, engakhishwa kuma-clove wegalikhi amasha. I-Allicin ithambekele ekuwohlokeni ngakho-ke kufanele yenziwe ifomu lokwengezelelwa okuzinzile ukuze ithole ifomula elinamandla lesikhathi eside. Ukuvalelwa kwe-Ultrasonic kwe-allicin ku-nanoliposomes kuvikela i-allicin ekuwohlokeni futhi kuholele ekukhishweni kwezidakamizwa okuqhubekayo.
Ukwakhiwa kwemikhiqizo ye-allicin njengama-supplements kungumsebenzi oyinselele ngenxa yokungazinzi kwe-allicin. I-Allicin iyazwela ku-oxidation nasezingeni lokushisa, okusho ukuthi okuqukethwe kwe-allicin kwehle ngesikhathi nangezinga lokushisa. Ikakhulukazi ukushisa nokugcina nokugcina kuyizinto ezibucayi. Umsebenzi we-Allicin uzinze ku-4ºC uma kuqhathaniswa ne-allicin egcinwe ekamelweni lokushisa (cishe ngo-22ºC). Impilo yengxenye yayo yamakhemikhali kwa-4ºC yayizimisele ukuthi ibe ngu-approx. Izinsuku ze-150, ngenkathi kushisa ekamelweni kwakungu-approx. Izinsuku ezingama-20.
Ukulungiswa kwangaphambili kwe-allicin sis enye into ebalulekile okufanele icatshangelwe. I-Allicin ibukeka izinzile kakhulu kugalikhi elisikiwe kunogalikhi womhlabathi.
Uma kukhulunywa ngokukhishwa kwe-ultrasonic, ngokuvamile i-sonication isebenza kangcono lapho indawo enkulu yendawo itholakala, okuwukuthi lapho ugarliki usemhlabathini kahle. Ngakho-ke, ukwelashwa kwangaphambili kwangaphambi kokugaya (ukugaya vs isilinganisi) sikagalikhi kufanele kusungulwe njengepharamitha eyengeziwe ngaphandle kwepharamitha yenqubo ejwayelekile ye-sonication. Funda kabanzi mayelana nokukhipha i-allicin ekhishwa ku-garlic!
I-Allicin Liposomes Yokuqina Kwesikhathi Eside
I-Allicin ithambekele ekuwohlokeni kwe-thermal futhi ibhujiswa ngaphansi kwezimo ze-acidic (pH 3.5 nangaphansi). Ukukhishwa kwe-Allicin kanye nezithasiselo kufanele kugcinwe endaweni ebizwa ngokuthi, okusho isiqandisi, cishe. I-4ºC yokuqinisekisa ukuqina kokuphila kwengxenye. Unyaka owodwa.
Ukwenziwa kwe-allicin ku-lipid nano carriers njenge-liposomes nama-nanoemulsion gels kwandisa impilo yeshalofu nokuqina kwemikhiqizo ye-allicin.
Ukwakhiwa Kwamandla Okuphelele kwe-Allicin-Loaded Liposomes
Lu et al. (2014) bika ukulungiswa okuphumelelayo kwe-allicin nanoliposomes isebenzisa ukuguquguquka kwesigaba kwe-allicin. Kwasetshenziswa amapharamitha alandelayo: isilinganiso se-lecithin-allicin se-3.70: 1, isilinganiso se-lecithin-cholesterol esingu-3.77: 1, isikhathi se-ultrasonic 3 min. I-40 sec., I-organic phase-aqueous phase ratio ye-3.02: 1.Ukuphumelela kokufakelwa kwe-allicin efakwe ngaphakathi kwe-75.20 ± 0.62% ngosayizi oqondile we-allicin nanoliposome ka-145.27 of 15.19 nm. I-allicin nanoliposomes elungiselelwe nge-ultrasonic ifaka ukukhishwa kwezidakamizwa okuqhubekayo, okunika amandla ukukhishwa okuqinile kwesithako esisebenzayo esikhathini esengeziwe. Lokhu kusiza ukuphathwa kwezidakamizwa nezithasiselo futhi kunciphisa imiphumela ye-cytotoxic.
Funda kabanzi mayelana ne-Ultrasonic Liposome Ukulungiselela!
Ukwakheka kwe-liposome: Umthombo wamanzi we-amoyo oyisisekelo kanye ne-phospholipid enamakhanda we-hydrophilic kanye nemisila ye-hydrophobic / lipophilic
Ama-Ultrasonically Nanomemulsion Gels ane-Allicin
Ama-nanomemulsion gels asebenzisa i-polyethylene glycol ahlolwe ngempumelelo njenge-allicin drug carrier ukuze kuthuthukiswe ukuncibilika kwamanzi kanye nokutholakala kwe-allicin. (Bheka uRanjbar et al.)
Funda kabanzi nge-Ultrasonic Nano-Emulsification!
UP400St, i-400 Watts enamandla homogeniser enamandla, yokwenza ama-liposomes nama-SLN
I-High-Performance Ultrasonicators ye-Liposomal Encapsulation
Izinhlelo ze-Hielscher Ultrasonics 'zingamadivayisi athembekile asetshenziswa ekhemisi nasekwenziweni kokungezelela ukwakha ama-liposomes asezingeni eliphakeme alayishwe ngama-antioxidants, polyphenols, acid acid, amavithamini, ama-peptides nezinye izinto ezihlanganisiwe. Ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ayo, abakwaHielscher bahlinzeka ngama-ultrasonicators avela kuma-compact hand-hand lab homogeniser nama-bench-top ultarsonicators ezinhlelweni ze-ultrasonic zezimboni ngokugcwele zokukhiqizwa kwamanani aphezulu we-liposomal form form. Ukwakheka kwe-liposome ye-Ultrasonic kungaqhutshwa njenge-batch noma njengenqubo eqhubekayo yolayini. Uhla olubanzi lwe-sonotrodes ye-ultrasonic (eyaziwa nangokuthi ama-probes noma izimpondo) nemikhumbi ye-reactor iyatholakala ukuqinisekisa ukusethwa okuphezulu komkhiqizo wakho we-liposome. Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher sika-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwayo.
I-Allicin iyikhemikhali ekhiqizwa lapho ugalikhi echobozekile noma emisiwe. Kutholakala kwifomu lokungezelela ekudleni, kutholakele ukunciphisa ukuvuvukala futhi kunikeze nezinzuzo ze-antioxidant.
Ugalikhi omusha uqukethe i-amino acid ebizwa nge-alliin. Lapho i-clove ichotshozwa noma inqunywe, kukhululwa i-enzyme, i-alliinase. U-Alliin ne-alliinase bayasebenzisana ukwakha i-allicin, ethathwa njengesakhi esikhulu segalikhi esisebenzayo.
Izakhi ze-organosulfur zika-Garlic ezifana ne-allicin ziyaziwa ngemiphumela yazo ekhemisi kufaka phakathi i-antioxidative, anti-protozoal, anti-inflammatory, antimicrobial, anticancer, kanye nemiphumela ye-cardioprotective.